जीन्दगीको ‘एकदिन’ नियाल्दा...
राजेन्द्र गाैतम झापा - शनिबार, असोज २४, २०७७
नियात्रा, यात्रा संस्मरण, यात्रा निबन्ध वा यात्रा वर्णन, जे भनौं ‘एकदिन’को छुट्टै अर्थ र महत्व छ।
खासगरी नेपाली साहित्यमा यात्रा संस्मरण लेखनले पाठकलाई आफू पुग्न नसकेको ठाउँमा सँगसँगै डोहोर्‍याइरहेकोछ ।
यही भावभूमिमा भर्खरै एउटा कृति बपजारमा आएको छ । झापाली पत्रकार तीर्थ सिग्देलको एकदिन।
साउथ एसियाका कतिपय देशको भ्रमणपछि ती देशले गरेका प्रगति र उन्नतिका कथासँग नेपाली परिवेश समेटेर त्यो सिग्देलले यो कृति तयार पारेका छन् ।
एक दिन (समय कथा) जीवन, यात्रा र भोगाइ नामको पुस्तक, जसले जीवनलाई भोगाइसँग तुलना गरेका छन्।
यात्रालाई फगत घुम्नु वा डुल्नुको अर्थमा मात्र हेरेका छैनन्।
पुस्तकको प्राक्कथनमै लेखिएको छ, पर्यापर्यटन र भ्रमणजस्तो विषयलाई जुन देशको जस्तो अवस्था छ, त्यससँग आफ्नो देश र अवस्थाको कमैले मिहीन तुलना गरेका होलान्!
जताजता गइन्छ, त्यो ठाउँको बारेमा प्रकाश पार्ने तर आफ्नै मुलुकको परिवेशसँग तुलना गर्न सिक्ने र सिकाउने अवस्था सिर्जना गर्नु पुस्तकको खाट्टी विशेषता हो।
बिनाकारण वा निरुद्देश्य भ्रमणको अर्थ हुन्न। अर्थात्, त्यो भ्रमणले कुनै सार्थकता प्रदान गरोस्। यात्राले सुखद् वा दुःखद् दुबै खाले अनुभूति गराउँछ।
यात्राले पाठ सिकाउँछ।जुन पाठबाट सिकेर अगाडि बढ्न सकियोस् । लेखकले लेखकीयमै लेखेका छन्।
मानिसले आफ्नो ज्ञान र विबेकलाई सदैब उचित ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्छ। अझ पत्रकार आफैँमा लेखक भएपछि लेखकीय शक्ति र सत्ताको उपयोग ठीक ठाउँमा गर्नुपर्छ।
नियमित काममा रहेको संचारकर्मीले आफ्नो कामलाई एउटा ड्यूटीको रुपमा मात्र लियो भने त्यो त्यहीँ सकिन्छ ।
तर, जब उसले आफ्नो ज्ञानको ढोकालाई खुल्ला र बढाएर लग्यो भने ऊ लेखक बन्छ, एक दिन( समय कथा) का लेखक तथा पूर्वका सक्रिय पत्रकार सिग्देलले आफ्नो पुस्तकको लेखन कलालाई यसरी नै व्याख्या गरेका छन्। उनी निर्धक्क भन्छन्, ‘हरेक पत्रकारले किताब लेख्न सक्छन्। केवल उनीहरूले ज्ञान र विबेकको दायरा बढाउनु पर्छ।’
पत्रकारले लेखेका किताबमा खोज र अनुसनधान हुन्छ। सिग्देलका यसअघि तीनबटा पुस्तक प्रकाशित भइसकेका छन्। जीवनको गति (२०७३) , पूर्वको राजनीति (२०७४) , मनोनेट (२०७६), एक दिन (समय कथा) चौथो कृति हो।
अघिल्ला तीनवटै कृतिले अलग्गै पहिचान बनाएका छन्।
यद्यपि साहित्य क्षेत्रमा यसअघि प्रकाशित मनोनेट ( कथासंग्रह)ले निक्कै बजार ततायो। खासमा उनको लेखनशैली मनछुने भएकैले हो भन्न हिच्किचाउनु हुन्न।
लेखकको भनाइलाई सिरानी लगाउने हो भने एक दिन (समय कथा) लकडाउनको समयभित्र लेखिएको किताब हो।
बिगतमा गरिएका यात्रा र त्यसक्रममा भोगेका विषयले उनलाई सधैँ चिमोटिरहन्थ्यो रे! यो लेख्न पाए हुन्थ्यो, त्यो लेख्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहन्थ्यो रे! संसारभर जब कोरोनाको सन्त्रास छायो, तब उनमा यो किताब लेख्ने जाँगर पलायो।
लेखक भन्छन्, ‘खासमा संकटकै समयको सदुपयोग गर्ने हो । त्यो समय पढ्न लेख्नका लागि उपयुक्त हुन्छ।’
किनभने घरैमा बस्दा अरु के काम गर्ने र ? उनले त्यो समयको सही सदुपयोग गरेको सबिस्तार सुनाए।
तीर्थ युवा पुस्ताको एउटा शसक्त लेखकको नाम हो। पत्रकारिता क्षेत्रबाट लेखन बिधामा उदाउँदै गरेको भएपनि उनले यसअघि छाडेको अमिट छापले नेपाली पाठकको मन खिचेको छ।
यो करले भन्नु पर्दैन कृतिले आफैँ पर्गेल्छन्। लेखनमा आफ्नो अलग शैलीको प्रयोग, शिल्प र प्रस्तुतिले नेपाली पाठक माझ उनका किताबले लोकप्रियता कमाइरहेका छन्।
कमै मात्रामा यस्ता प्रतिभा लेखनमा शसक्त हुने गर्छ। जो परम्परागत लेखन शैलीबाट पर हट्न सक्छन्।
आफू एउटा सक्रिय पत्रकार भएपनि किताब लेखाइलाई निरन्तरता दिने उनको सपना र योजनाको बिवरण सुन्ने हो भने जो कोहीलाई पनि लोभ लाग्छ।
खासगरी एउटा लेखकले साहित्यको एउटा बिधामा मात्र कलम चलाएर परिचय स्थापित गर्न सक्दैन भन्ने सिग्देलको मान्यता छ।
एउटा शसक्त लेखक बन्नका लागि साहित्य बिधाका सबै क्षेत्रमा उत्तिकै छाउन सक्नु पर्दछ ।यही मान्यतालाई आत्मसात गर्दैगर्दा उनको एक दिन (समय कथा) कोरोना कहरकै बीच बजारमा आइपुगेको छ।
एकदिन(समय कथा) लेखकको जीवनको भोगाइ, अनुभूति र यात्राको परिणाम हो।
जसरी यसअघि मनोनेट कथासंग्रह मार्फत मनले बुझ्ने मनको भाकालाई मनोवैज्ञानिक शैलीमा उनले प्रस्तुति गरेर नेपाली साहित्यमा एउटा नयाँ बहसको थालनी गरेका छन्।
यो पुस्तकले पनि एउटा फरक बिषयलाई उठाएर अर्को बहसको आरम्भ गरेको छ।
मानिस जीवन यात्रामा छन्।
उनीहरुले आफूलाई एउटा योद्धाको रुपमा चिनाउँछन्। तर, जीवनको मूल्य र मान्यताभन्दा पनि पर हटेर एउटा यायाबरजस्तै बनिरहेका छन्।
यात्राका क्रममा हामी आफैँ पनि रमाइलोलाई मात्र प्राथमिकता दिन्छौं। सेल्फी संस्कृतिमा रमाइरहेका छौं।
जीवन, यात्रा र भोगाइले अनुभूत गरेका विषयलाई महसुस गर्दैनौं।
एकदिन(समय कथा)ले उजागर गरेको एकदमै अलग बिषय यही हो, जसलाई लेखकले जीवनलाई एकदिन मात्र हो भनेका छन्। एकदिनले नै जीवनलाई निर्देशित गरेको छ, हुन्छ।
त्यो एकदिनले नै मानिसको जिन्दगीका लागि निर्णायक भूमिका खेलेको हुन्छ।
र, त्यही एकदिनको पर्खाइमा ऊ हुन्छ, जुनदिनले उसलाई आकासमा पुर्‍याउँछ वा रसातलमा भसाउँछ।
जति वर्ष बाँचेपनि र जेजे नै गरेपनी मान्छेका लागि एक दिनको मात्र बडो महत्व हुन्छ।
हरेक मान्छे त्यही एक दिनको पर्खाइमा हुन्छ, प्रगतिका, उन्नतिका र सफलताका खातिर। प्रत्येक दिन मेहनत गरिरहेको हुन्छ, जिन्दगीको परीक्षामा उर्तीण हुनका लागि ।
लेखक भन्छन्, ‘अलेली कमाउनु , बालबच्चा र आफूहरू बस्ने झुपडी बनाउनु र भए पुगे सानो एउटा गाडी चढ्नु नै त जिन्दगी रहेछ नि!’"
आज नै मान्छेका लागि सबथोक हो। भोलिले त निरासा जन्माउँछ। भोलि त के हुन्छ, कसलाई थाहा छ र ? तसर्थ, आजकै दिनमा सफल हुन चाहन्छ मान्छे।
एउटा दिन, एउटा क्षण र एउटा पलको प्रतीक्षामा बसेको हुन्छ मानिस ।
त्यो दिनको त्यो क्षण, त्यो क्षणको पनि त्यो पलका लागि उसले गरेको तपस्याको फल लिन तयार भएर बसेको हुन्छ हरेक मानिस।
जसका लागि सालौसालसम्म बाँचिरहेको हुन्छ, मान्छे।
लामो प्रतीक्षाबाट प्राप्त प्रतिफल लिनका लागि ऊ तम्तयार भएको हुन्छ।
जन्म जिन्दगीको एउटा सुखद् पल हो। त्यो पनि केवल एक दिन हो। पढाइ, लेखाइ, परीक्षा, जागिर, विवाह, घरगृहस्थी , बालबच्चाको जायजन्म, शिक्षा, दीक्षा, मृत्यु यो सब एक दिन हुन्छ।
हरेक क्रियाकलाप एक दिन हुन्छ नै।
कुनै रोकावट, कुनै बाधा ब्यवधान बिना ती सबै काम नियमितरुपमा भइरहेका हुन्छन्।
ती सबै काम न भोलिका दिनमा हुनेछन् न हिजो भएका थिए।
जिन्दगीमा जे जति घटना, परिघटना भएका हुन्छन्, ती सबै एकदिन भएका छन् , हुन्छन्।
खासमा बिहान उठेदेखि रातमा सुतेसम्म पूरा गरिने काम कर्तव्य नै पूर्ण जीवन हो। रात त अन्धकारमा बित्छ, निद्रामा जान्छ। दिनको उज्यालोमा गरिने क्रियाकलापले जीवनलाई सार्थकता प्रदान गर्दछ।
हो, वास्तबमा भोलि त नहुने रहेछ। उसलाई आजले मात्र बाँच्न प्रेरित गर्छ, आजले नै अगाडि बढ्न मद्दत गर्छ।
ठीक त्यसरी नै जिन्दगीको एउटा पल यसरी पनि बित्छ, जहाँ हामी कुनै न कुनै तरिकाबाट यात्रा गरिरहेका हुन्छौं। त्यो दिन, त्यो क्षण, त्यो पलले हामीलाई अगाडि हिँड्न र अगाडि बढ्न मद्दत गरिरहन्छ।
यात्रामय जिन्दगीको रहस्यमय गहिराइमा डुब्न बाध्य र राजी बनाइरहेको हुन्छ।
असन्तुष्टिले सन्तुष्टि प्रदान गर्दछ। असफलताले नै सफलता। यसरी नै आजको दिनमा प्राप्त असफलताले उत्पादन गरेको असन्तुष्टिले उसलाई अगाडि बढाउँछ। त्यही असन्तुष्टिले असफलतालाई पछार्छ र सफलता हात पार्छ।
हो, त्यही एक दिन हो। जुन दिन मान्छेले सफलता चुमेको हुन्छ। असफलतालाई लात मारेको हुन्छ।
हामी त्यही एक दिनको ब्यग्र प्रतीक्षामा हुन्छौं। जुन दिनको पर्खाइमा रहन्छौ, चाहे त्यो यात्राका क्रममा अनुभूति गरेका विषयहरु किन नहुन् या घरगृहस्थी कै क्रममा भोगेका कुरा नै हुन्।
ती सबै विषयबस्तुभित्र एउटा पक्षले काम गरिरहेको हुन्छ, त्यो दिन कहिले आउला ?
हो, त्यो एक दिनको कथा हो। त्यही भोगाइ हो। यात्रा वर्णन हो। समयको कथा हो, यो एकदिन ।
प्रकाशक :- मिडिया रिसर्च सेन्टर
लेखक :- तीर्थ सिग्देल
मूल्य :- ३००
पृष्ठ :- १८४
कृति :- चौथो